Health (स्वास्थ्य शिवीर) – .:: Nepaliko Aawaj
Health (स्वास्थ्य शिवीर)
स्वास्थ जीवन का लागि स्वास्थ खाना । २९ पुष २०७४, शनिबार १५:२६
डा. सन्तोष भुषाल नेपालीको आवाज अनलाईन स्वास्थ्य डेस्क स्वास्थ जीवन का लागि स्वास्थ खाना जीवन अनमोल एब अबसरहरु मय छ । हरेक मानिस आफ्नो जीवन सुखमय रुपमा ब्यतित गर्न चाहान्छ । सुख मय जीवन को लागि स्वस्थ प्रमुख आधार मानिन्छ र स्वस्थ्य रहन हाम्रो..
सबै पेट दुखाइ ग्यास्ट्रक होइनन् !! २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०४:३१
डा. सन्तोष भुषाल नेपालीको आवाज अनलाईन स्वास्थ्य डेस्क जन मानस मा सामान्यतया पेट दुखाइ हुने बित्तिकै मलाइ ग्यास्टिक भयो भने बुझाइ रहेको पाइन्छ । पेट मा हुने सामान्य दुखाइ कुनै जटिल रोग को सन्केत हुन सक्द्छ भने कहिले काहीँ जटिल दुखाइ पनि सामान्य..
के हो बाथ ज्वरो र यसबाट कसरी बच्ने ? (Acute Rheumatic Fever) १७ चैत्र २०७३, बिहीबार ०३:३७
[caption id="attachment_2007" align="alignnone" width="350"] डा. सन्तोष भुषाल[/caption] बाथ ज्वरो बारे डा. सन्तोष भुषालले दिनुभएको जानकारी सामान्यता बाथ रोग भन्नाले जोर्नी दुख्ने रोग भन्ने बुज्न सकिन्छ , तर बाथ जोरो अर्थात मेडिकल भाषामा भन्नू पर्दा "Acute Rheumatic Fever" प्राय बच्चामा देखिने मुटु ,..
चितवनमा डेंगुको महामारी, सतर्क रहन चिकित्सकको आग्रह । २१ आश्विन २०७३, शुक्रबार ११:१९
महेश पाण्डे, २१ असोज, चितवन नेपालीको आवाज अनलाईन न्युज डेस्क चितवनमा डेंगु रोग माहामारीको रुपमा फैलिएको छ । हाल सम्म नेपालमानै १२५ जनामा यो रोग देखिएकोमा चितवनमा मात्र १०४ जना मा यो रोगका बिरामी पाईनुले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । अझ त्यसमा पनि..
दशैंमा के खाने त ? हाल चितवनमा देखीएको डेङ्गु तथा स्क्रोप्स टाईपस कस्तो रोग हो ? (भिडियो सहित ।) २० आश्विन २०७३, बिहीबार २२:४४
नेपालीहरुको महान चाड सबैको घरमा भित्रि सकेको छ । यो चाडमा धेरैले धेरै परिकार खाई रहेका हुन्छन् यस बिषय र हाल चितवनमा देखीएको डेङ्गु तथा स्क्रोप्स टाईपसको बिषयमा हामीले जनरल फिजिसीयन डाक्टर नारायण अधिकारीसंग कुरा गरेका छौ हेरौ उक्त कुराकानी..